अनुसन्धान भन्छ: तपाईं गल्ती घटाउन चाहनुहुन्छ ? ध्यान गर्नुहोस् - Kathmandu Express
काठमाडौं- कतै तपाईंको हतारमा बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी त छैन! आत्तिनुपर्दैन। नियमित ध्यानको अभ्यासले तपाईंको यो बानी सुधार आउन सक्छ। अमेरिकाको मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीको पछिल्लो अनुसन्धानले ध्यानको नियमित अभ्यासले कुनै पनि व्यक्तिको गल्ती गर्ने आदत घटाउन मद्दत पुग्ने देखाएको छ।
Previous articleएमाले स्थायी कमिटी बैठक आज पनि, १०बुँदे कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गर्ने
Next articleविपद्का बेला राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह